Manandafy Rakotonirina – MyDago.com aime Madagascar
Ivereno ny 19 febroary 2011
Tsy tokony ianteherana amin-drahalahy ny fampodiana an-dRavalomanana eto an-tanindrazana, hoy ny mpitarika ny MFM ALDR Manandafy Rakotonirina, raha nitondra ny hafatra fohy ho an’ireo mpitaky ny fampodiana tsy misy fepetra ny filoha Ravalomanana, tamin’ny Asabotsy lasa teo teny amin’ny kianjan’ny MAGRO Behoririrka.
« Tsy ny Sadc no hantenaina hampody an’ity Filoha taloha ity, fa ny vahoaka malagasy mihitsy no mila mamerina ny hetsika nataony tamin’ny 19 febroary 2011, izay nahavory olona tsy latsaky ny 2 hetsy teny Ivato raha nikasa hody teto Ravalomanana. Isika dia mila maka fanjakana, hahafahantsika mibaiko ny miaramila mba tsy hisy hahasakana ny fiverenany eto ». Io no fototry ny fampodiana an-tanindrazana an-dRavalomanana raha ny hevitr’ity anisan’ny mpitarika ny ankolafy Ravalomanana ity.
10 andro ihany
Mila manana folo andro amin’izany famoriana ny vahoaka marobe izany ny hetsika rehetra dia rava ho azy ny fitondrana ankehitriny, hoy hatrany ny fanamarihana nataony. Tsy Ravalomanana velively no hisisika ny hody aty, ary tsy ny tenany ihany koa no mendy amin’ny hirotsahana ho fidina ho filoham-pirenena, fa mila porofoina eo imason’izao tontolo izao fa misy vahoaka eto mikiakiaka ny famerenana azy eto an-tanindrazana sy ahafahany mirotsaka ho fidiana amin’ny fifidianana ho avy. Ny fihetsiky ny SADC hatramin’izao dia te-haka toky tokoa fa ilaina ho amin’ny famerenana ny tontolo politika milamina ity Ravalomanana ity, sady mila mahafantatra izy ireo fa mbola misy olona marobe, tsy eto Antnananrivo ihany fa manerana an’i Madagasikara mihitsy, hoy ihany ny lehiben’ny « Mafana » nanohy ny fanazavany.
Miova ve ny hevitra ?
Tsy nisy resaka ho fiandrasana ny fanatanterahana ny sonia na tsia ny resaky ny mpitarika Manadafy Rakotonirina, fa ny ho fandravana ny fitondrana tarihin-dRajoelina indray izany izao no fototry ny hetsika sy ny hevitra rehetra ? Noporofoin’ireo rehetra nandray anjara tamin’ny fanamarihana ny 26 jona tao amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka indray mantsy raha iny hita omaly iny fa mizara sy tsy mitovy mihitsy ny fijery ny raharaham-pirenena hatramin’izao. Vory lanona ny vahoaka teny an-kianja, ka iny ve no santatry ny 10 andron’i Manandafy Rakotonirina ? Andrasna ny tohiny !
Auteur Ony RambeloPublié le 27 juin 2011 Catégories Malagasy, Politique
7 pensées sur “Manandafy Rakotonirina”
Ka alefaso re fa inona foana no andrasana e! hilaozan’ny omby mihahaka eto isika ny farany. Sady izay indray miandry toloram-potsiny. Ka tarito ary ry Atoa Manandafy o! ny olona efa hatry ny ela no vonona fa ianareo mpitarika no be kajikajy. Tsy efa hita taratra ve fa miandry ny fihetsiky ny Malagasy ny communauté internationale, izy tsy hamporisika mivantana akory fa fomba fiteny diplomatika ny azy ka aza ilaozana manjeny ny andro ho lava rey olona.Tsy misy afa-tsy isika ihany hoy aho fa tsy iandrasana olon-kafa izy ity, fa azy angaha ny firenentsika e!
Tena marina ny teninao ry Manjaka!
Averiko ihany ho’aho fa tsy hihetsuika mihitsy ny CI raha tsy mihetsika mafy isika, satria tsy manana porofo mihitsy rizareo hoe tena misy marina ve ny mpanohitra!.. Raha isika eto amin’ny MAGRO dia mbola ampitahianay tamin’ny olona teny amin’ny 13 Mai tamin’ny krizy ireny!
Koa aoka re isika mba samy hihetsika amin’izay e! Aoka mihitsy ianareo mpitarika mba hizarazara ny andraikitra dia asaina mihetsika ny rehetra! izaho mino fa vonona ireo fa tsy misy « leader » izay manentana sy mitarika azy mafy!
Tena efa mila tolombahoaka mintsy zao, tena efa tsy azo ekena intsony izao fitondrana izao, ka handao re hianga tanteraka amin’izay ry vahoaka, efa tena tsy hisy intsony ny harena ho an’ny taranaka fa ritra daholo.
Reraka mihitsy KM mahita ny gfisintonako ny tady :
Fa dia miaraka amin’i Bemafohy- Manjaka- Meva aho !
Alefaso ny RODOBE re e!
Aiza ny RODOBE e ???!
raha sanatria ka mody eo i Ra8 dia fatiny no raisinareo rehetra mpanaraka azy ery @ magro fa aza mieritreritra fa hoe izy velona no hitarika ny fivorianareo ary fa lasa fianadrasana ny vata mangatsiakany no ataonareo any. Mazava
Sao dia mba ianareo no hisitri-belona any apasana fa enjehan’ny ratsy natao?????
Tsy « sanatria » fa tsy maintsy ry djo foza maimbo! tsy misy azonareo rahonana eo fa tsy ianareo no tompony
na ny sampinareo , na mbola hanao sorona avo 2 heny noho izay efa vitanareo izay aza ianareo ! »tsy maintsy
mody dadanay « .Raha manak’ambo avereno taholo ny fananany nangalarinareo ho an’ny zanany GASY madinika
fa tsy mana-kambo ,fa mbola hatsembohan’ny dadanay no hanjakana,miaraka @ famarotana tanindrazana sy
fandrobana tsy ho voatanisa eto,koa ianao indray no mba mianakendry !tsy misy matahotra izay FOZA efa
maimbo eran’izao tontolo ozao eto!!!!!
Dia tena tsy menatra sy tsy matahotra Ilay Mahatahotra indrindra ve ianao ty ry Djo dj??
Ianao mihintsy no taranak’i Kaina!!!
Mieritrereta sy mandinihy ihany lahy! Aza manao ny lohasaha ho mangina!?
Précédent Article précédent : Ambiansa milay Magro, 26 Jona 11
Suivant Article suivant : Cnosc : Dingana faharoa ho an’ny dinika samy Malagasy